Alpha Centauri: inona izany, toetra, zava-dehibe ary zava-baovao | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 10/05/2022 10:00 | astronomia
Stephen Hawking, Yuri Milner ary Mark Zuckerberg dia nitarika ny filankevi-pitantanana iray ho an'ny hetsika vaovao antsoina hoe Breakthrough Starshot, izay azo ampiasaina indray andro any amin'ny kintana mifanila amin'ny Tany ny teknolojia, Alpha Centauri. Ankoatra ny maha lasibatra "mora" azy, satria izy no iray amin'ireo kintana akaiky indrindra amin'ny masoandro, dia nijery ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika ny astronoma mba hahitana planeta mitovy amin'ny Tany. Alpha Centauri no kintana akaiky antsika, fa rehefa miresaka momba ny habakabaka isika dia tsy dia akaiky loatra. Mihoatra ny 4 taona fahazavana izy io, na 25 lavitrisa kilaometatra. Ny olana dia ny fandehanana an-habakabaka, araka ny fantatsika, dia miadana be. Raha nandao ny planetantsika tamin'ny 11 kilaometatra isan-tsegondra ny sambon-danitra Voyager izay nandeha haingana indrindra tamin'ny fotoana nandaozan'ny olombelona an'i Afrika, dia efa tonga tany Alpha Centauri izy io izao.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia milaza aminao ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Alpha Centauri, ny toetrany sy ny maha-zava-dehibe azy.
2 Toerana sy kintan'ny Alpha Centauri
3 Mety hisy ve ny fiainana?
Io no kintana akaiky indrindra amin'ny masoandro ary tsy hita afa-tsy any amin'ny ila-bolantany atsimo. Izy io no kintana fahatelo mamiratra indrindra eto an-tany ary misy kintana maromaro mitovitovy amin'ny teboka iray amin'ny hazavana. Ny kintana akaiky indrindra amin'ny masoandro dia kintana telo ao amin'ny rafitra Alpha Centauri.
Ny kintana roa lehibe dia Alpha Centauri A sy B, izay mamorona mpivady mimari-droa. Izy ireo dia 4,3 taona fahazavana eo ho eo amin'ny Tany.. Ny kintana fahatelo dia Proxima Centauri. Alpha Centauri A sy B dia mihaona isaky ny 80 taona amin'ny orbitra barycentric mahazatra. Ny elanelana eo anelanelan'izy ireo dia 11 eo ho eo (AU na AU), mitovy amin'ny elanelan'ny Masoandro sy ny Uranus. Proxima Centauri dia ampahadimin'ny taona mazava na 13.000 XNUMX AU avy amin'ireo kintana roa hafa, elanelana izay misy astronoma manontany tena raha tokony hoheverina ho anisan'ny rafitra iray ihany izy io.
Alpha Centauri A no kintana fahefatra mamiratra indrindra hita ety an-tany, fa ny hazavana mitambatra avy amin'ny Alpha Centauri A sy B dia somary lehibe kokoa, noho izany dia io no kintana fahatelo mamirapiratra indrindra hita eny amin'ny lanitra. Ny kintana mavo Alpha Centauri A dia karazana kintana mitovy amin'ny masoandrontsika, saingy somary lehibe kokoa. Noho ny akaiky azy amin'ny tany, dia toa mamirapiratra eny amin'ny lanitra. Ny hafanan'ny etỳ ambonin'ny tany dia mari-pana Kelvin vitsivitsy kokoa noho ny an'ny Masoandrontsika, saingy ny savaivony lehibe kokoa sy ny velaran-tany manontolo dia mahatonga azy ho avo 1,6 heny noho ny masoandro.
Ny mpikambana kely indrindra amin'ny rafitra, ny voasary Alpha Centauri B, dia kely kely kokoa noho ny masoandrontsika ary manana karazana K2. Noho ny hafanana mangatsiaka kokoa ary ny antsasaky ny famirapiratry ny Masoandro ihany, Alpha Centauri B dia hamirapiratra ho azy amin'ny maha-kintana faha-21 mamiratra indrindra eny amin'ny lanitra. Ireo roa ireo izy ireo no singa mamiratra indrindra amin'ny rafitra, mihodidina manodidina ny ivon'ny sinton'ny tany iray isaky ny 80 taona. Ny fihodinana dia elliptika be, ary eo amin'ny 11 AU eo ho eo ny elanelana eo anelanelan'ny kintana roa, na ny halaviran'ny Tany sy ny Masoandro.
Toerana sy kintan'ny Alpha Centauri
Ity rafitra kintana ity dia iray amin'ireo rafitra kintana akaiky indrindra amin'ny masoandro, eo amin'ny 4,37 taona hazavana miala ny masoandro, izay mitovy amin'ny hoe 41.300 tapitrisa kilometatra.
Ny kintana mandrafitra ny Alpha Centauri dia telo:
Proxima Centauri: io kintana io dia mandoro solika miadana kokoa, ka mety hisy lava kokoa. Tamin'ny volana aogositra 2016, nambara ny fahitana planeta miendrika tany mihodidina ny faritra azo onenana manodidina ny Proxima Centauri, planeta antsoina hoe Proxima b. Proxima Centauri dia hitan'ny astronoma Scottish Robert Innes tamin'ny 1915.
Alpha Centauri A: Kintana volomboasary K-karazana K izay an'ny rafitra kintana mimari-droa. Mamirapiratra izy io, lehibe, ary heverina ho antitra noho ny masoandro. Izy io dia sokajiana ho dwarf mavo. Manana fihodinana 22 andro izy io.
Alpha Centauri B: Kintana tena mitovy amin'ny kintana lehibe indrindra eto amintsika, ny Masoandro, amin'ny karazany G, ary mihodina amin'ny orbitra eo amin'ny 80 taona eo ho eo. Inoana fa teraka tamin'ny fotoana mitovy amin'i A.
Nahita porofo mifanipaka ny mpahay siansa sy ny astronoma momba ny fisian'ny planeta roa mifandray amin'ny tany ao amin'ny Alpha Centauri. Ny fikarohana dia mifandray akaiky amin'ny fahitana ny exoplanet Alpha Centauri B tamin'ny 2012. Ity planeta ity dia manana endri-javatra mitovy amin'ny Tany. Ny fisian'ny exoplanets dia milaza amintsika fa tsy maintsy misy planeta maromaro mihodidina ao anatin'ny rafitra iray ihany.
Mety hisy ve ny fiainana?
Nahaliana ny mpahay siansa foana ny fahafahan'ity rafitra ity hampiantrano tontolo misy aina, saingy tsy mbola hita tany ny exoplanets fantatra, amin'ny ampahany satria akaiky loatra ny astronoma ny mijery zavatra planeta ao amin'ny faritra. Saingy tao amin'ny taratasy iray nivoaka ny alarobia tao amin'ny Nature Communications, ekipa iraisam-pirenena astronoma dia namaritra sonia fakan-tsary mafana mamirapiratra ao amin'ny faritra azo onenana an'i Alpha Centauri A, noho ny Teleskaopy Very Large an'ny European Southern Observatory (ESO). Chili.
Ny famantarana dia azo ao anatin'ny tetikasa Alpha Center Regional Near-Earth (NEAR), izay nomen'ny ESO sy ny Breakthrough Observing Astronomy Initiative. miaraka amin'ny fanomezana manodidina ny 2,8 tapitrisa euros. Ity farany, notohanan'ny Rosiana miliaridera Yuri Milner, dia mikaroka planeta be vato, miendrika tany manodidina an'i Alpha Centauri sy ireo rafitra kintana hafa ao anatin'ny 20 taonan'ny hazavana.
Ny NEAR dia ahafahan'ny fanavaozana maromaro amin'ny teleskaopy Shiliana, anisan'izany ny chronograph thermale, izay manakana ny hazavan'ny kintana ary mitady sonia hafanana avy amin'ny zavatra planeta rehefa taratry ny hazavan'ny kintana. Rehefa avy namakafaka ny angona 100 ora, nahita famantarana manodidina ny Alpha Centauri A.
Ny planeta resahina dia tsy mbola nomena anarana akory, ary tsy voamarina ny fisiany. Ny famantarana vaovao dia milaza fa mitovy habe amin'ny Neptune izany, izay midika fa tsy planeta mitovy amin'ny Tany no resahina, fa baolina lehibe misy entona mafana dimy ka hatramin'ny fito heny noho ny Tany. Ao amin'ny tranga hypothetical fa nanana aina izy, dia mety hiseho amin'ny endrika mikraoba mihantona eny amin'ny rahona. Mety ho vokatry ny zavatra hafa ihany koa ilay famantarana, toy ny rahon'ny vovoka kosmika mafana, ny zavatra lavitra kokoa ao ambadika, na ny fotona mirenireny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Alpha Centauri sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » Alpha Centauri